OLA defeated ENDF on three fronts and Siezed many Weapons claims by OLA – Kichuu
HomeFun VideosOLA defeated ENDF on three fronts and Siezed many Weapons claims by OLA
Oromo Liberation Army declares war
HD ABO jaal Daawud Ibsaa haalli isaan keessa jiran wanti hubatame jiraachuu baatus namni ol seenee mana sanaas gadi bahuu danda’aa waan hinjirreef rakkoon soorrataa osoo hinafin gidiraan mooraa jireenyaa isaanii keessatti mudachuu danda’a jechuun yaaddoo uumame.
Tarii haalli nageenya isaanis maal irra akka jiru addaan baafachuun dadhabamee jira. Erga Facaasaa Caamsaa 3,2021 galgala manni isaanii itti cabee meeshaa quunnamtii hunda harkaa guuranii as waan isaan irra jiran hinbeekamin jira.
“Oromoon kabajamuu qaba.
kabajamu baannaan Oromoon Sodaatamuu qaba.”
~ Koloneel Gammachuu Ayyaanaa
GAAFFII FI DEEBII Ajajaa WBO jiddu gala Oromiyaa Jaal jireenyaa rabbummaa waliin taasifame
Responding to terror org designation, Oromo Liberation Army declares “total war” on Ethio govt.
Not new dynamics, but confirms that govt’s ability to run election in Oromia and stability there now depends on outcome of violent not peaceful competition.https://t.co/qnIq8tHnDd pic.twitter.com/dVJVF2k50U
— William Davison (@wdavison10) May 7, 2021
በመስቀል አደባባይ የኢድ ኢፍጣር ተቃውሞ / አሜሪካ የኢትዮጵያ ለውጥ አብቅቶለታል አለች/ ግብፅ ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ ወደ ጦርነት